I-China i-Lithium Bromide Absorption Technology abavelisi kunye nabathengisi | SHUANGLIANG ECO-AMANDLA
I-Shuangliang inezixhobo zokonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo ekusebenzeni okuzinzileyo kwihlabathi liphela, zisasazwa kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngorhwebo, amaziko oluntu, imboni, kunye neemveliso zithunyelwa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.
Phantse iminyaka engama-40 yamava kwi-R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo zokonga umbane
Isixhobo esikhulu sefriji / izixhobo zokumpompa ubushushu R & D kunye nesiseko sokwenza
Umthathi-nxaxheba ekwenziweni kwe-China ye-lithium bromide yokutsalwa kwe-chiller / impompo yobushushu esemgangathweni wesizwe
Uxinzelelo oluphezulu lomoya kunye ne-COP ekhokelela kushishino
IShuangliang ingaphezulu kwe- Ngama-30,000 okonga umbane kunye nezixhobo zokhuselo lokusingqongileyo ekusebenzeni ngokuzinzileyo kwihlabathi liphela, zisasazwa kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngorhwebo, amaziko oluntu, amashishini, kunye neemveliso zithunyelwa kumazwe angaphaya 100 amazwe kunye nemimandla kwihlabathi liphela.
Itekhnoloji ekhokelayo isetyenziselwe ukuqinisekisa ukuba
ukusebenza eliphezulu chiller
1. Iimpompo ezimbini kwaye ngaphandle Chela nemilomo
Ekhohlo-kuPhakathi-ngasekunene ilungiselelo: i-absorber-evaporator-absorber;
Ukufunxa kufakwe iipleyiti endaweni yemipu yokutshiza;
Kuphephe ukwehla kwamandla okupholisa;
Yandisa ixesha lokusebenza kobushushu.
2. Ukuhanjiswa kwesiqandisi ngokuThoba iipleyiti kwi-Evaporator
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwendawo yokudlulisa ubushushu;
Ukunciphisa ubukhulu befilimu;
Ukuphucula ukusebenza kakuhle;
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwempompo yefriji.
3. Imigangatho ephezulu yeeTyhubhu kunye noCwangciso oluCwangcisiweyo lokuHamba kwi-Evaporator
Qinisekisa ukuhanjiswa kwefuthe lokuhambisa ubushushu;
Ukuphucula ukusebenza kobushushu.
4. Itekhnoloji yokuDlulisa uBushushu
Ukuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo nokwandisa umjikelo wobomi;
Ukusebenza kobushushu obuphezulu obuphezulu be-93.5%.
5. Itekhnoloji yokuChasa
Iityhubhu ze-Evaporator zikhuselwe kubanda. Kuyabonakala ngokuqokelela amanzi asefrijini kwi-condenser kwigumbi elisezantsi le-evaporator, emva koko ampontshelwe kwiipleyiti zokuvuza. Yiyo ke loo nto ifriji enefriji yayixhonyiwe.
6. Ukuhamba kweMigangatho yeSisombululo
Mahala crystallization kunye nokunciphisa umhlwa;
Ukuphucula ukuthembeka nokuqonda ulawulo ngqo chiller.
7. Inkqubo yokuThengwa kweGesi engenakunqandwa
Ukungena komoya kwesixhobo sokucoca esilungiswe ngaphakathi kweyunithi ukuqinisekisa ukusebenza ngokukuko komoya.
8. Inkqubo yokukhutshelwa kweRhasi engapheliyo
Lawula ukuqaliswa kunye nokucinywa kwevalvenoid valve esebenze ngoxinzelelo oluphezulu kunye nokucwangciswa koxinzelelo olusezantsi lwesilinda yokucoca ngokuzenzekelayo, ngenxa yoko ukuqala / ukuyeka kompompo wokucoca kunye nokukhutshwa kwerhasi kuyafezekiswa.
9. SL Ukude
Inkqubo yokujonga kude ye-SL yakhiwe ngokusekwe kwiiseva zangaphakathi zeShuangliang, kwaye abasebenzisi banokundwendwela ngokulula kwiwebhusayithi ngeakhawunti ebhalisiweyo kunye negama lokugqitha ukujonga ulwazi oluphangaleleyo.
Imisebenzi: ukuqokelelwa kwedatha, ukubeka iliso kwi-Intanethi, ukugcinwa kwedatha kunye nolawulo, uhlalutyo lwedatha kunye nokuchongwa kwengcali, isiphoso isilumkiso kwangethuba kunye nesaziso sealam.
Zonke ezi teknoloji zinelungelo elilodwa lomenzi kwaye zihambile zenza ukuba umsebenzi usebenze ngakumbi, uthembeke kwaye ubelula.
Egqithileyo ukonga amanzi kunye neplume yokunciphisa inkqubo yokupholisa eyomileyo
Okulandelayo: I-Chiller yombane kunye neTekhnoloji yoPompo lobushushu
I-Lithium Bromide Chiller yokuCoca
ILithium Bromide Absorption Ubushushu Pump